Dhididka Xadgudubka ah ee Sababa Kicinta Weyn ee Isbaanish ilaa Shiinaha iyo Beyond
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Fashion » Dhididka Xadgudubka ah ee Sababa Kicinta Weyn ee Isbaanish ilaa Shiinaha iyo Beyond
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • dhaqanka • Wararka Fashion • News • Wararka Spain • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Duufaannada dhididka ah - Lahaanshaha sawirka balenciaga.com
Laba surwaal oo cawl ah ayaa sababa nabarro sababtoo ah qaar badan ayaa sheegaya in naqshadeedu ay tahay eex iyo cunsurinimo. Weligaa ha ka fikirin in lammaanuhu ku kacayaan ku dhawaad ​​$ 1200. Taasi waa iska cadahay inaysan ahayn wax badan oo laga xumaado.
Laakiin haddii aad tahay Mareykan Madow, tafaariiqda alaabta noocan oo kale ah waxaa loo qaadan karaa inay tahay wax laga xumaado.
Ka waran surwaaladan qaaska ah ee sida xun u xoqaya dad badan?
Taariikhdu ma sharxaysaa mowqifka ay qaar ka soo horjeedaan naqshadeeyaha dharka go'aankeeda ah inay suuq galiyaan surwaalkan, iyagoo sharraxaya jahwareerka bulshada?
Maxaa ka dhigaya surwaal -dhididku mid aad u xun? Aan taariikhda dib ugu noqonno si aan u sharraxno tan.
Naqshaddu waxay qaadataa moodada ah in qofka feerka feerka feeraha ah uu ka soo fiiriyo dhexda oo uu ka dhigo hal maro oo isku xiran, taasoo la macno ah in lagu dhex dhisay.
Qoraalkan moodada ayaa dib u bilaabmay 1990 -maadkii, gaar ahaan muusigga hip -hop -ka labada ciyaaryahan ee Kriss Kross oo surwaalkooda xirtay - gadaal -gadaal - ka hooseeya feeryahannadooda oo aan la dhisin, laakiin wuu qabsaday. Ma aha qaybta surwaalka gadaal ee waa surwaalka dhicinaya ee feeryahanadu muujinayaan qayb.
Wax yar ka dib waxay astaan ​​moodis u noqotay dhalinyarada Madow Ameerika. Sannadihii 2000 -meeyadii, si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah Goballadda Maraykanka waxay meel -mariyeen Sharciyo mamnuucaya ku -dhaqanka labiska sidan, laakiin dadka dhaliila waxay sheegeen inay taasi si aan caddaalad ahayn u takooreen dadka Madow.
Qaar ka mid ah sharciyadaas ayaa la tirtiray iyadoo Ururka Xorriyadda Madaniga ah ee Mareykanka ay ogaadeen in tusaale ahaan Shreveport, Louisiana, fulinta sharciga ay u adeegsanayeen sharcigan surwaalka saggiga ah marmarsiiyo lagu beegsanayo dadka Madowga ah oo ay baadi goobayaan oo ay dhici karto in la xiro.
Helitaanka Qaybta Cunsuriyiinta
Markaa markii naqshadeeye fashion-ka Balenciaga uu labo ka mid ah feeryahannadan ku dhex dhisay surwaal safkeeda Trompe L'Oeil ah, ma ahayn wax aad u badan $ 1,190 sicirka dhejiska oo ay dadku ka xumaadeen, in kasta oo qaar ka mid ah twitter-ka waxay ku eedeeyeen sumadda laba jibbaar waxayna su’aal gelisay sumadda sare ee surwaalka.
Waxa mid ka mid ah isticmaaleyaasha TikTok uu sheegay ayaa ah in surwaalku “dareemayo cunsuriyad” sababta oo ah wuxuu ka goynayaa dhaqanka Madow. TikTok -kan gaarka ah, marka la fiiriyo, tirinta ugu dambeysay waxaa la daawaday in ka badan 1.6 milyan jeer. Markii isticmaale TikTok Mr200m uu arkay Balenciaga oo dhididka u sii iibinaya London oo soo dhigay fiidiyow, qof ayaa la maqli karaa isagoo leh: “Tani waxay dareemeysaa cunsurinimo… ”
Waxaa jiray kuwo kale inkasta oo ay sheegeen in aysan u arkin surwaalka dhididka in ay yihiin cunsuri. Mid ka mid ah faallooyinka ayaa lagu sheegay in feeryahannada lagu tolay surwaal ay ahayd wax caadi ah 90 -meeyadii.
Lahaanshaha sawirka balenciaga.com
Balenciaga ayaa sheegtay inay inta badan isku darto gogosha dharka hal mar waxayna tusaalaysaa tusaalooyin ay ka mid yihiin “jiinis la dul saaray surwaalka tracksuit [iyo] funaanadaha badhanka lagu dhejiyay funaanadaha,” ayuu sharraxay Sarkaalka Suuqgeynta, Ludivine Pont. "Surwaalladan Trompe L'Oeil waxay ahaayeen fidinta aragtidaas."
Goorma sahaminta mareegaha Balenciaga, runtii waxay leedahay walxo kale oo isugeyn ah oo dhar-xidhasho ah sida Sweatpants-ka la isku dhejiyay oo leh dhididka dhididka ku xidhan ee dhexda ku xidhan… $ 1,250. Duufaannada dhididka ah ee dhici kara, waxay u muuqdaan inay ka lumeen mareegaha habeennimadii.
Taariikh Dheeraad Ah Oo La Tixgaliyo
Asalka dhabta ah ee bayaankan moodada ee surwaalka gilgila ayaa dhab ahaantii leh taariikh aad u madow. Waxay bilaabatay markii Madow markii ugu horreysay lagu addoonsaday Ameerika oo laga soo qaatay caado loo yaqaan "buck busting" ama "buck breaking." In kasta oo ereyadan ay markii hore tixraacayeen faragelinta duurjoogta, milkiilayaasha beerta koonfureed waxay adeegsadeen weedhahan sidoo kale waxay tixraacayaan ku dhaqanka “jebinta” addoommada ragga Madowga ah.
Nimankan Madowga ah waxaa la geyn lahaa meel fagaare ah oo dhammaan addoommada laga dhigay inay daawadaan maadaama lagu amray inuu surwaalka hoos u dhigo oo uu hore u foorarsado. “Sayidka” ayaa si arxan darro ah u kufsan lahaa ninka oo suunkiisa qaadan doona ka dib si ulakac ah surwaalkiisu u lulo. Tani waxay isaga ka dhigtay calaamad muujinaysa in “la jabiyey” ama “la jebiyey” si looga hortago addoommada kale falalka diidmada.
Maaha Markii Ugu Horaysay
Tani ma aha markii ugu horreysay ee naqshadeeye moodeel uu ka tallaabsado xariiqda soohdinta anshaxa. Dhowr sano ka dib, Loewe oo ah quwadda dharka raaxada ee Isbaanishka ayaa soo bandhigtay a funaanad madow iyo caddaan ah iyo surwaal la dhigay (iyada oo shaadhka kaliya lagu iibiyo $ 950) oo qayb ka ah ururinta kaabsulka gaarka ah. Waxaa lagu tilmaamay inay dhiirrigelisay aqoonyahankii reer Ingiriisiga ee qarnigii 19aad William De Morgan.
Dharka, si kastaba ha ahaatee, wuxuu dhaliyay muran deg -deg ah markii dadku ay sheegeen inay aad ugu raaxaysteen si la mid ah lebiskii ay xirnaayeen maxaabiistii xerooyinkii Nazi -ga intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
September 16, 2021 at 18: 41
Yaa iibsan doona $ 1200 oo surwaal dhidid ah, oo aan ahayn beel-deked, hanti-wadaag shampagne ah, oo caabuda qashinka geetooyinka, iyada oo aan wax kharash ah u bixin si aad ugu noolaato iyaga oo aad uga fog?